Uninzi lwamantombazana uyazibuza xa, eqinisweni, isondo sokuqala kunye nomntu omtsha kufanele ukuba kwenzeke kwaye nokuba lixesha elingakanani ukususela ekuqaleni kokuthandana, ukutshata kunye nokumanga de ukulala ngesondo sokuqala. Kule ngongoma kwesi sizwana sikhalaza izibini zembono, ezihluke kakhulu komnye. Abanye abantu bavame ukukholelwa ukuba ngokukhawuleza intombazana ilala nomfana, ngokukhawuleza ulwalamano lwabo luya kugqitywa. Kodwa abanye bakholelwa ngokuchaseneyo, bayaqiniseka ukuba akuyimfuneko ukulibazisa ngesondo kwaye ungangena kwisondo ngesantya esitsha ngomhla wokuqala. Nangona kunjalo, ngaluphi na ukulungelelanisa ukuba uvumelane ngesondo, ngoko ungazisoli.
Ngokwesondo njengoko kulindelwe.
Umbuzo oyintloko malunga nobulili bokuqala kunye nomntu omtsha, ngokuqhelekileyo kubakho xa iqabane liqala ukutyhola intombazana ngalo. Kodwa, okanye kwimeko apho amaqabane omabini athatyathwa ngombono wecala eliqinileyo komnye. Ngezihlandlo ezinjalo, kuncinci ukuwela lo mgca kwaye ube kwindawo edibeneyo kunye nomnye. Kodwa, kwaye uqikelele isiphumo sezinto eziza kwenzeka emva koko, kwaye iimeko eziza kuphuhliswa kwixesha elizayo zingaphathwa kuphela okanye ziqikelelwe. Ngendlela, ngokwecandelo lophando, inqaku elithandekayo kukuba enye yesithathu yamantombazana, nokuba yodwa kanye ebomini babo, kodwa yabelana ngesondo kunye nomntu omtsha ngomhla wokuqala. Nangona kunjalo, kungakhathaliseki ukuba buhlungu kangakanani, malunga nesiqingatha sabameli abakhethiweyo besini esifanelekileyo ngeli xesha bayazisola. Ukongeza kuzo zonke ezi ngasentla, izazi zengqondo ziye zakha umzekelo wecala ukuba kwiimeko apho, ngethuba lokuqala, intombazana ithambekele ekwenzeni inkwenkwe ehlala kuyo, ukuba unommemela kumhla wesibili ngowama-50 ukuya kuma-50 ekhulwini.
Umhla wokuqala kunye nesondo.
Yintoni, eneneni, inokuphuma kule nto, ukuba intombazana sele isele kumhla wokuqala iyavuma ukulala ngesondo? Nantsi kubalulekile ukuphawula ukuba abo bantu ngomhla wokuqala baqonda ubudlelwane bezesondo bayaqiniseka kakhulu kubo kwaye abayi kukwazi ukudixeka iqabane labo elitsha. Ngaphezu koko, bathanda ubulili kwaye abanakuphila ngaphandle kwalo. Ngamafutshane, ubulili ngenye yeendawo zokuqala ebomini babo. Kodwa, le ngcamango, njengomthetho, inamacala amabini, okwesibini apho ithi ubuthakathaka besini kunye nokuzithemba ngokunyanisekileyo kunokuchaphazela kakubi ukukhula kobudlelwane. Akunakukwazi ukusebenza. Ubuhlobo obunjalo nomntu omtsha, ngokuqhelekileyo kuthiwa "ubulili ubusuku obunye" kwaye akukho. Ewe, kwaye ukuba ngaba isibini siholwa yinto engaphezu komnqweno onqwenelekayo kunye nomnqweno, kungathi kukho konke ngokukhawuleza njengoko kungekho ndawo, ayiyi ndawo. Nangona ikhondo elifanelekileyo leemeko kunye nomtshato, akukho mntu uya kukhanyela. Enyanisweni, kule meko, ithuba lokutshintshwa kweziganeko landa, umzekelo, ngenxa yokukhulelwa okungalindelekanga. Kodwa ukuba konke kulungile kwaye emva kobusuku umntu esabiza okanye azinikezele ukudibana, qiniseka ukuba ubulili bakho bokuqala bomeleza ulwalamano lwakho, kwaye ke yonke into iya kuba yinto ezayo.
Uqhagamshelwano lokuqala lwezesondo phakathi kwiveki emva kokumazi, ngokuqhelekileyo, luqala, oluvelisa ubudlelwane obutsha kunye obufutshane kakhulu, isiseko esisisiseko esona, ngokuqinisekileyo, ngesondo. Kodwa, ungatsho, iintsuku ezisixhenxe, mhlawumbi kuya kuthiwa, iiveki lonke sele lide lide kwaye, ngaphezu koko, alikho elincinci. Ngethuba leentsuku ezisixhenxe, abantu abaselula kwiintlanganiso kunye nohambo bangakwazi ukwazana ngakumbi kwaye bazi ihlabathi elingaphakathi ukuba bonke abathathi-nxaxheba kubudlelwane obusanda kudalwa bahlala. Kwaye oku akunjalo. Kodwa kuseyixesha lokujonga yonke into kwaye ukuqonda ukubaluleka kweemvakalelo ezincinci. Enyanisweni, amathuba okuba olu dlelwane luya kudluliselwa kwicandelo lalabo abaphelisa ngomtshato, akukho mntu uya kuqinisekisa ngokuqinisekileyo ngekhulu leepesenti. Le inoveli inokusebenza njengophuculo oluhle kunye noqeqesho phambi kobudlelwane obukhulu kunye nomtshato.
Ukuphantse kwiiveki ezimbini.
La mabini ahlala ehleli iintsuku ezilishumi elinanye, kwaye nantsi ke, ixesha lokuqala elilindelwe ... Ngokwezibalo, uninzi lwentsebenziswano enjalo lunokucingwa lukhulu kwaye luhlala njalo. Kwaye i-alamu yomtshato ehamba ngendlela ibonakala icacile kwaye iyayiqonda. Eli gama linempembelelo entle ekuqaliseni ukuba ngaba abathathi-nxaxheba kwiveli bafanelekile kunye nokuba ngaba bayayifuna le ntsebenziswano.
Inomdla kweli xesha kukuba emva kokudibana nendoda enyangeni kwaye engazange adibane naye, wokuqala kunye nombaluli obaluleke kakhulu wesondo nentombazana ngokwakhe. Kungenzeka ukuba, kwinqanaba elincinane, isondo esilungileyo senza oku ngenxa yokuba bafuna ukubonga abo abakhethiweyo ngenxa yokumonde nokuzinikela kwakhe. Ngendlela, intsimi yeli gama ukuthetha ngokukhawuleza kobudlelwane akuyona nto inkunkuma yenkcitho. Emva koko, isibini esi sibini siyakwazi ukuqonda kakuhle kwaye sizenzele, ngasinye sodwa, izigqibo ezinzulu. Ngaphezu koko, eli lixesha luvavanyo oluhle kakhulu kumfana kuleso sesondo, unomdla kwintombazana ngokwakhe. Ubuhlobo obunjalo, ngokuqhelekileyo, buphela emtshatweni.
Ubuncinane kwiinyanga ezimbini nangaphezulu.
Kule meko, loo mfana kufuneka anikezelwe indondo yegolide yinto ayithandayo kwaye uyayiqonda intombi yakhe, ozimisele ukulinda ixesha elide kuthatha ixesha. Enyanisweni, aba bantu abanzima ukuyifumana, kwaye bacinga nokucinga kwabo. Ngokuqhelekileyo aba bafana banobuhlobo be-romantics yangempela, ngokuba indawo yokuqala ayifani ngesondo, kodwa iimvakalelo. Ukuba le nto mbazana inqume ukujonga inkwenkwe yakhe, kufuneka ibe ilungele into yokuba bayakwazi ukuyisebenzisa. Ewe, ukuba ulwalamano lwabo luye lwaxhathisa lo vavanyo, ngoko ke lulawulwa ngukulala ngesondo, kodwa uthando! Yaye into yokugqibela malunga nokuba kuyimfuneko yokwenza isondo kunye nomfana kufike kuwe. Into ephambili ukuhlala uphulaphule intuition yakho nento intliziyo ecebisa ngayo! Inhlanhla kuwe!
Kutheni umyeni wakhe engafuni ukulala ngesondo emva kokuzala?
Intombazana ayikwazi ukuba yilogi ebhedini
Ukuba indoda iyala umfazi ngesondo
I-Technique ye-massage eerotic
Ukunyamekela ngokunyamekela yonke intsapho!
I-BBQ shish kebab evela kwingulube namaapulo
Jam kusuka kwipine buds
Ziziphi iingcamango zomntwana osandul 'ukuzalwa?
Imidlalo yeNtshonkco kwi-kindergarten
Ukunyaniseka akuyona iphoso, kodwa ingxaki yomntwana
I-Goose kwi-oven tiles
I-inter-season shopping: indlela yokuhlaziya ngokufanelekileyo i-wardrobe ekwindla ngokuchanekileyo
Imilenze eluhlaza yomntwana
Umbhangqwana othandekayo: inhlanganisela ehamba phambili yeSkirt + Boots